Zimbabwe Mourns The 'Sharpest Thorn' In Mugabe's Side - How South Africa
by GR January 19, 2018, 3:27 pm 1.2k Views
Roy Bennett was called the “sharpest thorn” in Robert Mugabe’s side. Zimbabwe is mourning Roy Bennett, a white founding member of the main opposition party who died Thursday in a helicopter crash in the United States.
With his fluent Shona, earthy manner and passion for political change, Bennett won a devoted following among black Zimbabweans. He was known as “Pachedu”, meaning “one of us” in Shona.
Now President Emmerson Mnangagwa seeks to leave mentor Mugabe’s shadow, open the once-prosperous nation to the world and secure his legacy in what he vows will be free and fair elections in a few months’ time.
Previous article A List Of Events Happening In Cape Town From 19th To 28th January 2018
Next article Ladies: 5 Strong Warning Signs To Look Out For
A List Of Events Happening In Cape Town From 19th To 28th January 2018